कस्ता पुरुषबाट महिलाहरु ले बढी यौनसुख पाउँछन् त ? - Gaule Media ::
Home/रोचक/कस्ता पुरुषबाट महिलाहरु ले बढी यौनसुख पाउँछन् त ?
ramsharan१७ कार्तिक २०७४, शुक्रबार १४:०५
महिलाले कस्ता पुरुषबाट बढी यौनसुख पाउँछन् ?आफ्नो सुखद भविष्यका लागि प्रायःजसो महिलाको सपना धनी पुरुषसँग विवाह गर्ने हुन्छ । यो मान्यता हाल करिब–करिब विश्वभर नै लागू हुन थालेको छ । तर, वैज्ञानिकहरुले भने अर्को नयाँ कुराको खुलासा गरेका छन् । पुरुष जति धनी हुन्छ उसको यौनसाथीले पनि उत्तिक्कै चरम यौनसुख प्राप्त गर्छ । ‘ महिलाको चरम सुःख उनका यौनसाथीको आम्दानीमा भर पर्छ,’ युक्यासल युनिभर्सिटीका मनोविज्ञ डा. थोमस पोलेट भन्छन् । धनवान् पुरुषका कारण महिलामा चरम सुःख हुने प्रक्रियालाई ‘इभोलुसनरी एडप्सन’ बताउँदै विज्ञले सो प्रक्रिया महिलाको जिनमा विकसित हुने बताएका छन् ।
अन्तर्वार्ताका क्रममा उनीहरुको आम्दानी, यौन जीवन र अन्य विषयलाई पनि समावेश गरिएको थियो । तीमध्ये १५ सय ३४ पुरुष साथी भएका महिलाको जवाफलाई अध्ययनको प्रमुख आधार बनाइएको थियो । विश्लेषणबाट १ सय २१ महिलाले यौन सम्पर्क गर्दा सधैं चरम सुःख पाएको बताए भने ४ सय ८ जनाले प्रायः यस्तो सुःख पाउने बताएका थिए । यसैगरी, बाँकीमध्ये ७ सय ६२ जना महिलाले कहिलेकाँही चरम सुःख पाउने बताएका थिए । त्यस्तै, छनोटमा रहेका २ सय ४३ ले कहिल्यै पनि नपाएको वा मुिस्कलले कहिलेकाहीं पाएको बताएका थिए । यो तथ्यांक पश्चिमेली मुलुकको तथ्यांकसँग मेल खाएको अध्ययनमा बताइएको थियो । यौन चरम सुःखमा यस्तो भिन्नता देखिनुमा विभिन्न तत्व जिम्मेवार रहे पनि डा. पोलेटले पैसा प्रमुख कारक तत्व रहेको बताए । महिलाको चरम सुःख अनुभूति गर्ने आवृत्तिलाई यौनसाथीको आयले प्रभाव पारेको थियो । धनी यौनसाथीले महिलालाई बढी चरम सुःख दिएका थिए ।